Delata Internetntanetị: Netwọk gbachapụrụ agbachapụ na sava kwụsiri ike | Site na Linux
Delata thentanetị: Netwọk adighi adaba na ndi sava kwadoro
Debekwuo na centntanetị: Sava kwadoro maka forntanetị Ka Mma
.Nnɛ, ọha mmadụ ihe ọmụma dị ugbu a jikọtara na netwọk nke netwọk, igwe ojii, na Internetntanetị. Yana a onu, centralization nke Internet amụbawo n'aka ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọha na eze na nke onwe.
Ma, mmegharị na teknụzụ e kerekwa, nke na-achọ ma kwe ka mgbanwe nke usoro a. Mmegharị na teknụzụ nke na-enye ohere ma ọ bụ na-akwado ịkọwapụta nke returnntanetị, na nloghachi njikwa na ọbụbụeze nke otu nwa amaala, ma ọ bụ na o kwere mee mee ka ọ nwekwuo onwe, nchekwa, nkeonwe na nyocha, yana obere ikike hegemonic nke mba ofesi ma ọ bụ obodo, mpaghara ma ọ bụ ike ọchịchị ụwa.
N'ihi na ọ dịghị onye ụbọchị ndị a ọ bụ a nzuzo, otú centralization nke Internet na-emetụta anyị niile, ụfọdụ ndị ọzọ karịa ndị ọzọ, ma dị ka ndị mmadụ n'otu n'otu na ịgụnye. Ihe omuma atu di otutu, dika: Ojiji nke ndi oru ma obu ndi otu, nke ndi mmadu na ndi mmadu, nke ndi mmadu na ndi mmadu, maka ahia, nlezianya ndi mmadu, njikwa ndi mmadu, ndi mmadu ma obu ndi mmadu.
Ọzọkwa, mkpokọta ọnụọgụ ntanetị nwere mmasị na "nnọpụiche" gakwuru nwa amaala, otu na mba, site na otu ụlọ ọrụ ma ọ bụ otu ndị a, ma ndị ọha ma ndị nke onwe. Okwu nke gosipụtara, dịka ọmụmaatụ, mgbe mba ma ọ bụ otu nzukọ metụtara njikọ ya ma ọ bụ nnweta ya, site na mkpebi aka ike, ikpe na-ezighi ezi ma ọ bụ otu akụkụ nke ndị ọzọ.
1 Mgbasa ozi gbasaa
1.2 Ihe atụ
2 Kwadobe sava
2.1 Rectzọ ziri ezi
2.2 Kedu ihe ha bụ?
2.3 Ihe atụ
Mgbasa ozi gbasaa
Internetntanetị nwere ike ịgbasa ozi nwere ike ịkwụsị ịbụ utopia, ma ọ bụrụ na njikọ anyị anaghị aga ozugbo na onye na-eweta ọrụ ịntanetị (ISP), mana kama anyị rawụta na-ejikọ ndị ọzọ na-agagharị agagharị, si otú a na-emepụta netwọkụ ebe ọ bụla, ka emesịa bụrụ akụkụ nke ifntanetị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Na nke a ga - ekwe omume site na ịwụnye sọftụwia ma ọ bụ nhazi a kapịrị ọnụ na router anyị nke na - enye ohere ị mepụta netwọkụ mesh.
Enwere ike iwere ihe atụ nke teknụzụ ndị a ma ọ bụ usoro mgbasa ozi site na ụdị nkesa kọmputa a na-ekesa na nke teknụzụ ọhụụ blockcheni ya na usoro ya. Ebe ọ bụ na netwọk ekwesịghị ịbụ "kwa se" centrally. Ugbu a netwọk nwere ike ịbụ nke ụdị 3, ya bụ, ha nwere ike ịbụ:
Etiti: Netwọk ebe ọnụ ya niile dị n'akụkụ, ma jikọta ya na nke etiti. N'ụzọ dị otú a na ha nwere ike ịkparịta ụka naanị site na ọnụ ọnụ ọnụ na ọwa ya. Na ụdị netwọkụ a, ọdịda nke etiti na-ebelata data data na akụkụ ndị ọzọ niile.
Nkewa: Ntanetị ebe enweghị otu ọnụ ọnụ, kama ọ bụ ebe mkpokọta nwere ọdụ ụgbọ mmiri dị iche iche. Yabụ, ọ bụrụ na otu n'ime "usoro nchịkwa" kwụpụ, ọnweghị ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ ole na ole fọdụrụ na netwọkụ niile ga-efunahụ njikọta.
Kesara: Ntanetị ebe enweghị otu ọnụ ọgụgụ etiti. N'ụzọ dị otú a, na nkwụsị nke nke ọ bụla ọnụ nwere ike ime ka nkwụsị nke ụfọdụ ndị ọzọ na ntanetị. Nke a bụ n'ihi na na netwọk ndị a, a na-ejikọta ọnụ ndị ahụ na ibe ha na-enweghị mkpa ijikọ site na otu ma ọ bụ karịa etiti ọnụ.
Ugbu a enwere ezigbo ihe atụ nke ezigbo netwọkụ nke ụdị a, nke ga - abia n’ọdịnihu dị mma kwesiri itolite ma gbasaa ebe niile. Ihe atụ dịka:
N'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa, enwere atụmatụ na nnwale na-atọ ụtọ n'echiche a nke ịmepụta netwọị dị iche. Iji maa atụ, na Dubai (United Arab Emirates), a na-eme nnwale na-eji Bluetooth nke ngwaọrụ niile dakọtara iji mepụta netwọkụ enweghị isi.
Na Mastodon bụ ezigbo ihe atụ nke netwọkụ enweghị usoro. nke na-esiteghi na teknụzụ blockchain. Ọ bụ ezie na ndị ọzọ dị ka Steem, ebe onye ọ bụla nwere ike ịgba ọsọ ọnụ na ntanetị ma nweta nnomi zuru oke nke ọdịnaya ya niile, ọ bụrụ na ọ dabere na ngọngọ ahụ.
Dị ka ọtụtụ n'ime anyị maraworị, a na-echekwa ozi na-ekesa na ntanetị na kọmputa ndị a na-akpọ sava. Nke ahụ bụ, ndị a bụ kọmpụta nke n'aka nke nwere mmemme na-eme ka o kwe omume ịnye ọrụ na mmemme ndị ọzọ ma ọ bụ kọmputa na netwọkụ ma ọ bụ thentanetị, nke anyị na-akpọ ndị ahịa ma ọ bụ ọnụ.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Sava Internetntanetị niile na-agbanye ma na-ejikọ, ehihie na abalị, ụbọchị 365 kwa afọ, na ha bi na nnukwu ebe data, ikekwe na nnukwu obodo dị na mba mepere emepe, iji jikwaa akụkụ dị mma nke ịntanetị sitere na gburugburu ụwa.
Rectzọ ziri ezi
Mana, ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ data ndị a na-egbochi ihe nnwere onwe na imeghe nkwukọrịta. Ebe ọ bụ na ndị a na-akwado ịhazi Intanet, nke n'aka nke ya, na-eme ka iji ihe ọmụma anyị na-eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi. Na mgbakwunye, ha na-ewere ozi a na-achịkwa dịka akụ ha, na-azụ ahịa yana ya na otu ndị na-enyocha anyị ma na-emebi nzuzo anyị.
Ya mere, ụzọ ziri ezi ịgbaso bụ ntinye, mkpokọta na iji obere sava, nwere ụzọ dị iche iche na ụzọ dị iche iche esi arụ ọrụ na ngwa ọrụ, sitere na ebe dị iche iche (mba) ma na-echekwa ya site n'aka ndị dị iche iche (SysAdmins), iji belata ma ọ bụ wepụ ihe egwu nke iji ihe ike ma ọ bụ belata ozi na ọrụ anyị.
Kedu ihe ha bụ?
Ndị ọrụ nchekwa onwe ha ndị pere mpe na ndị nweere onwe ha bụ ndị na-akwụ ụgwọ maka ụdị gọọmentị nke netwọkụ na data anyị. Enwere ọtụtụ nkọwa dị ugbu a banyere ha, mana na-ehota Tatiana de la O na edemede site Ritimio Dossier na ọbụbụeze nke teknụzụ, nke dị na peeji nke 37, ọ kọwara ha dị ka:
“Ndị odi ijiri onwe ha ozi nke nkwado ha dabere na ọrụ afọ ofufo na mgbe ụfọdụ a na-akwụ ndị na-elekọta ha mgbe ha na-enweta ego site na obodo ha na-elekọta. Ya mere, ha anaghị adabere na ụlọ ọrụ ọha na eze ma ọ bụ nke onwe ha maka ọrụ ha. N'ọnọdụ ọ bụla, nnwere onwe nke ọrụ ndị a nwere ike ịdị iche, ụfọdụ na-anabata enyemaka ma ọ bụ na-abanye n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ebe ndị ọzọ nwere ike zoo n'ụlọ ọrụ ma ọ bụ nọrọ n'ụlọ agụmakwụkwọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ nka ma ọ dịghị mkpa nnukwu ego.
Dị ka ihe atụ nke kwurula sava arụ ọrụ taa anyị nwere:
Uru nke iji sava standa bụ:
Zere ahia na monetization nke ozi nkeonwe anyị na nke mkpokọta.
Hụ ụdị dịgasị iche iche na-enweghị nnukwu njedebe azụmahịa ma ọ bụ nke gọọmentị.
Mee ka nhazi nke teknụzụ gbasaa maka ihu ọha.
Mee ka ogo nke nnwere onwe nke obodo dị iche iche gbasara ụlọ ọrụ na gọọmentị.
Mee ka ndị ọrụ nyocha na ọzụzụ onwe onye nke ndị ọrụ dị iche iche.
Nwee nkwa nke ndị ọrụ ịgbanwe mgbanwe ọchịchị, mgbanwe ọchịchị na azụmahịa na saịtị saịtị ha.
Na -ehota Mastodon Network:
“Otu usoro mgbasa ozi siri ike na-esiri ndị gọọmentị ike ịgwa ndị mmadụ okwu. Ọ bụrụ na ihe nkesa na-akụda akụ ma ọ bụ na-amalite ime ihe na-adịghị mma, netwọkụ na-aga n'ihu ka ị ghara ichegbu onwe gị banyere ịkwaga ndị enyi na ndị na-ege gị ntị na ikpo okwu ọzọ.
Anyị nwere ike ikwubi na ịgbasawanye ntanetị, ma obu site na netwọọdụ adighi nma na / ma obu ndi kwadoro, bụ ụzọ ziri ezi ịga, ebe ọ bụ na antanetị na-emeghe ma na-emeghe agaghị enwe isi n'ezie ma ọ bụrụ na ejikọtaghị ọrụ ya na ntọala ya (njikọ).
Ọzọkwa, nnọpụiche net (nsonaazụ nke ịgbasa ozi) bụ ihe anyị niile ga-alụrịrị ma chebe eze na ntu. Ọ bụ ọrụ dịrị anyị ịmekọrịta ka nnukwu ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ, ma nke ọha ma nke ọha, ghara ịgbanwe ma ọ bụ gbanwee ya. Utnọpụ iche bụ ihe kachasị mma na weebụ, a gaghị echefu nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Delata thentanetị: Netwọk adighi adaba na ndi sava kwadoro
Echiche ahụ na-adọrọ mmasị mana echere m na ọ gaghị ekwe omume ebe ọ bụ na ozi anyị mgbe anyị na-agafe nke ọ bụla n'ime sava ndị ahụ agaghị echekwa na ha? Echeghị m ...
Mgbaghara m kwuru na-aza gị.
Zaghachi na Taraak
I kwesịghị ịtụ egwu maka nke ahụ, ebe ọ bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile gbasara ozi gbasara okporo ụzọ na amaala nke gafere ịntanetị na-enyocha, nyochaa ma ọtụtụ n'ime ya echekwara maka ụfọdụ megacorporations nzuzo na gọọmentị. Yabụ, a ga-enwe ohere ọ bụla na ọ bụrụ na e mepụta netwọkụ dị iche n'ime ma ọ bụ na mpụga na Internetntanetị, ha na-abanye otu ma ọ bụ otu n'ime ndị a eme. Mana na ngwụcha ụbọchị, echiche nke ịnyagharị, nchekwa ma nwekwuo nzuzo maka nwa amaala nkịtị ga-abụ ebumnuche a ga-enweta.
Mgbe mmadụ chọrọ ịnweta data, ha na-arịọ arịrịọ gị na ihe nkesa gị, ọ bụrụ na mmadụ emee bot nke na-edepụta ihe niile (ihe ha nwere ike ịnweta) n'ihi na nke ahụ bụ ihe ọzọ, mana ọ dị ka ịnwe ihe nkesa Apache gị weebụsaịtị gị.
A na-ebo Apple, Facebook, Google na Amazon ebubo naanị ha ma na-enyocha ya
Google Chrome 75 biara na onodu ogugu, PIN nyocha na ndi ozo